Lionel Messi oo Barcelona u sheegay inay la soo wareegaan 4-tan laacib si ay ula tartamaan Real Madrid – Gool FM
(Catalonia) 06 Juunyo 2017. Sida ay sheegayaan warar cusub oo ka soo baxay Spain in Lionel Messi uu kooxdiisa Barcelona u magac dhabay afar laacib oo ay tahay inay la soo wareegaan waa haddii ay doonayaan inay xagaaga soo socda la tartamaan Real Madrid.
Los Blancos ayaa La Liga ka gacan marooqsatay Barca iyadoo sidoo kale 4-1 Champions League uga qaaday kooxda Juventus.
Kooxda reer Catalonia oo xilkeeda tababaranimo dhawaan u dhiibatay Ernesto Valverde ayaa la filayaa inay lacago badan qarash gareyso suuqa xagaagan si ay u soo celiso mansabkeeda.
Sida ay sheegeyso Diario Gol Lionel Messi ayaa u soo jeediyay kooxdiisa inay la soo wareegaan afar laacib suuqa xagaaga.
Afarta laacib ayaa lagu kala sheegay daafaca Arsenal Hector Bellerin, xiddiga qadka dhexe ee PSG Marco Verratt, xiddigii hore ee Barcelona Gerard Deulofeu iyo dhaliyaha Borussia Dortmund Ousmane Dembele.
Laacibka reer Argentina ayaa aaminsan in haddii ay kooxdiisu keento afartaas laacib ay fasal ciyaareedka cusub koobab badan kula tartami doonaan Real Madrid.
RASMI: Peter Bosz oo loo dhiibay xilka tababaranimo ee Borussia Dortmund
Mohamed Ahmed Elmi says:
Warar kii shegayay lasowaregitanka lacibka Liverpool vilip cuntinho intey kudambeeyeen war igasiiya